Nantsi into ethethwa ngabantu malunga nebhedi yentwasatsheli kunye nengoma | Rayson
Nantsi into ethethwa ngabantu malunga nebhedi yentwasatsheli kunye nengoma
I-PATHAHERS isebenzise ithuba lezinto zokuphumla kwisilungiso sesibini eUnited States. S. UMgaqo-siseko owenza ukuba ilawule imipu engaqinisekanga esidlangalaleni. Isinxibo sezopolitiko sisiphumo seqela labantu abasebenza kunye ukuphakamisa iinkxalabo malunga nemicimbi yezentlalo. Benza njalo ngokunxiba ngendlela edityanisiweyo.
Kuthatha kwakhona imizuzu eli-10 ngaphambi kokuba ichiza lilungile. Ukuqala ukuthatha amayeza, cofa amayeza okwesibini. Unyango lweziyobisi luya kuqala kumasifundisane. Xa amayeza akho aphathwa, isifo esingenasigulo asiyi kufumaneka ngaphakathi kwemizuzu eli-10. Ukubona ukuba lingakanani ixesha elisele ngaphambi kokuba ichiza lilungile, chukumisa nje isifo sengqondo kwakhona kwakhona.
Umoya omdala okanye ongcolileyo unokubangela iingxaki zempilo ezinje ngeengxaki zokuphefumla kunye nokunyuka kwexesha ngokuhamba kwexesha. Ukuba ikhaya lakho libubudenge, linokubangela ukugula kakhulu. Inyathelo lokuqala lokucoca umoya kukucoca imibhobho ye-wipelation rhoqo. Oku kuyakususa nayiphi na inkunkuma okanye ukubumba kwaye kuqinisekiswe ukuba umoya kwisitovu sakho okanye i-moya yomoya icocekile.